Aluminum Fishing Boat Weghachi | Outboard Boat Motor Mmezi
Dị ka a ezumike nká onyinye onwe ya, Nna nna zụtara a ọhụrụ, ewepụghị ike, aluminum egbu azụ n'ụgbọ mmiri. Aluminum bụ a dịtụ ọhụrụ ihe eji ụgbọ mmiri n'oge ahụ. Nke a ụgbọ mmiri e weere na "ọhụrụ na kasị ukwuu" na 1966. Ruo a, o mere ka ya azu ụgbọ mmiri si plywood. The ụgbọ mmiri ahụ 16 ụkwụ n'ogologo, ogologo oge karịa ọtụtụ ụgbọ mmiri nke ụbọchị, ma mkpa maka ada azu ya mere ndị mmadụ nwere ike azụ na-ezu nkewa iji gbochie na-edoghi tangled. M na-eche nna nna m bukwa n'ịkụ azụ na ụmụaka na grandkids ka ya na ezinụlọ ya na-eto. Ọ bụ ihe Mkpa ọkụ ka ya nke okenye osisi ụgbọ mmiri, ìhè na o nwere ike ẹkedori na ibu ya niile site na ya onwe ya. Nke a ụgbọ mmiri, na ndị ya 1963 Evinrude 3hp moto na Silvertrol trolling moto, mebere ndị Irvin Travis ofufe egbu azụ n'ụgbọ mmiri na m mụtara na azụ, na-etolite na.
Nna nna m bụ onye ọkụ azụ na-efe efe na ikuku azụ bụ nanị ụdị ịkụ azụ anyị mere. Enwere m obi ụtọ na oge m na-eji azụ na nna nna m, papa, na ndị òtù ezinụlọ m. Ọ kụziiri anyị ọtụtụ n'ime ihe ọmụmụ ndụ, echekwara m onwe m na ọ bụ ezigbo onye nwere nna dị otú ahụ. Mgbe ọ nwụsịrị na 1981, ọ bụghị nna m ma ọ bụ m nwere ike iji mmetụta uche mee ka anyị gaa ịkụ azụ maka ihe dị ka afọ iri. Obere ụgbọ mmiri nne nna m na-agbada n'akụkụ nke ụlọ ahụ maka afọ 30 + sochirinụ. Mụ na papa m lọghachi azụ azụ, mana anyị nwere ọmarịcha ọhụrụ, ụgbọ ala ndị na-edozi ahụ. Ọ bụ n'oge a ka anyị sonyere Indianapolis Fly Casters nke nyeere anyị aka ịkwa azụ. Anyị jiri obi ụtọ nọgide na-azụ azụ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Indiana ma na-agbaji olulu ka ezinụlọ m tolitere. N'ikpeazụ, anyị nwetara Gheenoe abụọ ụgbọ mmiri ịkụ ụgbọ mmiri ga-eme ka mmadụ ise na-azụ azụ.
A mmiri, emere m atụmatụ a nnukwu azu njem na Nna m, Uncle na nwa ya nwoke, nwa m, nwa nwanne, na n'oge na-adịghị na-nwa-iwu onye m chọrọ ime ka n'ime a ada ọkụ azụ n'ihu ịnakwere n'ime ezinụlọ. Nke ahụ mere ka nwere asaa nke anyị, na m bịara ghọta na anyị mkpa ọzọ ụgbọ mmiri. M gara n'akụkụ m wụsịrị na leghaara pụọ ​​4 sentimita pine agịga na ebupụ Nna nna ochie egbu azụ n'ụgbọ mmiri. The ụgbọ mmiri ahụ na egwu udi mgbe ọdụ maka 30 + afọ. The osisi bụ ihe niile rere ure. The bolts na ẹkenịmde osisi ọnụ nile rusted, ụgbọ mmiri ahụ e merụsịrị ntụpọ si pine agịga na ịbụ n'ala. Olee otú m ka nna nna m epeepe njọ dị otú ahụ a ọnọdụ? Ọ bụ mgbe ahụ ka m mere ka mkpebi na-ịrụzi ya.
My nna Uncle Curt na-ma na ha 80 si. Amaghị m otú ọtụtụ ndị ọzọ na azu njem anyị niile ga nwere ọnụ ya mere Iweghachi n'ụgbọ mmiri a, ka anyị niile na-echeta ofufe azu na, ghọrọ niile ọzọ m mkpa. M kpebiri na m weghachi ya ndị kasị mma nke m ike na iju ha na anyị njem.
O were m banyere izu abụọ, na-arụ ọrụ n'etiti mmiri ozuzo mmiri na iti a ụgbọ mmiri n'ime udi. The ụgbọ mmiri ahụ na ndị dị otú ahụ ọjọọ udi nke na m kpebiri ájá gbawaranụ na agba ya. Ọ dịghị mgbe m na-arụ ọrụ na a ájá blaster n'ihu ma nwee ike gbaziri onye iji na m ikuku Compressor. Mgbe na-agba ụgbọ mmiri ahụ nke niile osisi, na rusted ígwè bolts, m ájá blasted ọ gbadaa iferi aluminum. M ahapụ a ole na ole customizations na nna nna m nwere dị ka pụta ìhè na AFT nko na clip na waya azụ nkata, na pụrụ iche ịṅụ ke n'akụkụ maka n'aka launching, otú ahụ ka anyị ga-ama na ọ bụ ka ya n'ụgbọ mmiri.
Ejiri m ụgbọala na-aba uru dị ka ụlọ ọrụ ma jupụta ụgbọ mmiri jupụtara na mmiri iji chọpụta nsị, nke ọtụtụ ndị dị. M na-edochi ọtụtụ mmiri mmiri na rivets na-emepụta ya na ugbu a, mkpụrụ na ụgbụ na-eme ka ọ gbanwee ya. Mgbe m kwusịrị mgbapụta ahụ, eji m ose mpempe akwụkwọ ma na-ese mpempe ime na mpụta nke ụgbọ ahụ, na-ahapụ ala ahụ agbanweghi agbanwe n'ihi na ọ nwere ihe mgbochi mbụ fọdụrụ na mmiri mmiri. Enwere m oge siri ike ịchọta "pepe azu ụgbọ mmiri" na ngwongwo na ihe ndị na-ere ihe na mpaghara. M merụrụ ịga John Deere ebe a na-azụ otu galọn nke John Deere na-agba chaa chaa na-acha akwụkwọ ndụ, nke m chere na ọ ga-adị mma maka ụgbọ mmiri na-azụ azụ, ọ dịkwa m mma! Ewughachiri m ebe a na-anọ oche ma na-ebugharị bọmbụ dị n'ihu ụgbọ mmiri ahụ, na-eji obere osisi mee ka m nwee ike ka m ghara itinye nnukwu ibu. Ana m edochi osisi na transom.
Ekpebiri m ime mgbanwe ụfọdụ. Enwere m ego, ngwá ọrụ, na ngwa mgbochi nke nna m ochie enweghị nanị n'oge ya. M tinyere oche atọ dị jụụ bụ ndị dị ezigbo mma ma e jiri ya tụnyere obere ụgbọ mmiri ndị anyị nwere n'oge gara aga. Ejiri m oche m. Ọ bụrụ na i lere anya na foto ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na oche ndị ahụ nwere ike ịgbanwe site n'akụkụ ruo n'akụkụ iji mee ka ụgbọ mmiri ahụ kwụ ọtọ. Nke a bụ ihe m mepụtara. A na-eji oche ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
My nna nna nwere na mbụ abụọ 6 volt batrị maka trolling moto nke ọ na-etinye na etiti nke ụgbọ mmiri n'azụ n'etiti oche. M mere otu ihe ahụ ma e wezụga n'ihi na otu 12 volt batrị. M efehe a "i papuas cable" site n'etiti ụgbọ n'okpuru n'ihu oche na-eji mkpọchi washers ime a maka ebe trolling moto ike USB jikọọ. M kwukwara a n'elu mmiri ọrụ bilge mgbapụta, ihe ga-abịa kemfe ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri ahụ malitere na-eri eri ọzọ. Dịghị mgbe anyị nwere a bilge mgbapụta na ochie ụgbọ mmiri.
M ka nwere na mbụ Evinrude 3hp Lightwin moto nke m weghachiri a afọ ole na ole gara aga, na ya Silvertrol trolling moto na m kpochara na-etinye azụ n'ụgbọ mmiri. M kpebiri na m chọrọ ka m nna nna aha ke ubom otú ahụ ka m nwere ụfọdụ bompa akwụkwọ mmado mebere na kwuru "Irvin Travis, The oké 'stripper olulu' ofufe ọkụ azụ - Spurgeon Indiana", nke m chere bụ a kwesịrị ekwesị ụtụ.
Mgbe otu awa ma ọ bụ otú nke-ekiri ụgbọ mmiri, otu onye na-atụ aro hapụrụ ụgbọ mmiri dị ka a ngosi nka ibe, ma ekpebiri m ẹkedori ya na ka nwa m, Tommy, na nwa-iwu, Alex buru ya n'ihi na mgbede azu. Ka m na-ele anya, ụgbọ mmiri ahụ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè. My nna jụrụ ịga ụgbọ mmiri n'ihi na ọ kọrọ itule na o nwere ya tọrọ afọ na-họọrọ nchekwa nke ọhụrụ ụgbọ mmiri. Curt na m wee n'ụgbọ mmiri si na ghọtara na anyị nwere na-re-na-amụta ogologo echefughị ​​art of ada azu mgbe ọ bụghị Inye ego mmiri oyi, ụgbọ mmiri. Curt na m bụ nnọọ arọ karịa anyị nọ gị ị tọrọ afọ nwere ịkpachara anya. N'ikpeazụ, anyị na-ejide na na nwere fun azu nke na ụgbọ mmiri ọzọ, ọ bụ ezie na ikwe m nnụnụ nkịta na ụgbọ mmiri ahụ wee dị nnọọ ukwuu n'ihe ize ndụ.